Tendrombohitra an-tany vaovao mavesatra Analog rindrina mitaingina ranomasina an-dranomasina Telefaona tsy mihetsika - JWAT306, Sina New Heavy Duty Tontolo iainana Analog rindrina mitaingina dock an-dranomasina Telephone Waterproof - JWAT306 Mpanamboatra, mpamatsy, orinasa - Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
2.Fanelanelana Analog finday. Hita ihany koa amin'ny kinova SIP / VoIP, GSM / 3G.
3.Ny handset Adiresy maheno miaraka amin'ny mpandray an-tsofina amin'ny mpandray anjara amin'ny fanenon-tena, Feo manafoana mikrô.
5.Stainless Steel Illumined Keypad, ny bokotra dia azo alamina ho bokotra haingana.
7.Phone mandeha mandeha.
9.Ny haavon'ny feon-kira: mihoatra ny 70dB (A).
10. Fameno sy loko miloko.
Ampidirina ny zotra an-tariby
1Packing: 1 set / carton, 6 kg / baoritra
Amplifier ao anaty trano